Madaxweyne Farmaajo oo fariin xasaasi ah u diray xildhibaanada baarlamaanka (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo oo fariin xasaasi ah u diray xildhibaanada baarlamaanka (DHAGEYSO)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa fariin aad u xasaasi ah u diray xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo qaarkood kasoo horjeestay ansixinta golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in isagu shaqsi ahaan uu aad ugu qanacsan yahay xukuumadda uu 21-kii bishan soo dhisay ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, sidaasi darteedna laga doonayo xildhibaanada in iyaguna ay codka kalsoonid ah siiyaan xukuumadda.
Sidoo kale, madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay in xilligaan aan la joogin waqtigii la mucaaradi lahaa xukuumadda, marka hore xildhibaanada laga doonayo inay codka siiyaan, kadibna wixii dhaliil ah ay kala xisaabtamaan.
“Aniga waan ku qanacsanahay xukuumadda uusoo dhisay ra’iisul wasaare Kheyre, waxaan ka codsanayaa xildhibaanada sharafta leh inay codka kalsoonida ah siiyaan wasiirada cusub, kadibna wixii dhaliil ah lagala xisaabtamo” Sidaas waxaa yiri madaxweyne Farmaajo.
Xildhibaano tiradooda gaareyso illaa 105 mudane ayaa ka codsaday ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre inuu dib ugu laabto golahiisa wasiirada cusub, kadib markii ay sheegeen inaan loo marin soo magacaabistooda waddo sax ah.